Moscow State University of Civil Engineering - Study na Russia
Moscow State University of Civil Engineering Nkọwa
Echefukwala atụle Moscow State University of Civil Engineering
Idebanye aha na Moscow State University of Civil Engineering
The National Research University “Moscow State University of Civil Engineering” - Bụ na-eduga nguzobe nke Russian Federation na ubi nke ewu na ụkpụrụ ụlọ mmụta. The University na-enye ọzụzụ (ụdị nile nke agụmakwụkwọ: oge niile, ọkara oge, gụnyere ọzụzụ na ojiji nke ndị ọcha nke anya mmụta teknụzụ). The agụmakwụkwọ bụ omume na mmefu ego ma ọ bụ ụgwọ ihe ndabere. MGSU bụ soò na nke zoo na filiation nke mahadum nke Russian Federation maka nri nke onwe ha nhọrọ maka ọzụzụ na ndabere nke quotas nke Ozi nke Education na Science nke Russian Federation n'ihi mma-arụ aga ime na mmeri nke Olimpik “Ọ bụ oge na-amụ na Russia!”. Ụmụ akwụkwọ ahụ na-nyere na mma na ala ụlọ mbikọ dị na campus nke University na 15-min. -eje ije site na agụmakwụkwọ ụlọ; na ụlọ mbikọ ụlọ na-haziri maka 2 na 3 mmadụ. Anyị na-enye aha-and-visa nkwado na nlekọta ahụ ike. Anyị na-enye ụmụ akwụkwọ na Scientific na nka na ụzụ Library, Obí nke Egwuregwu, psychological nkwado ọrụ, oge a ime ụlọ erimeri , ntụrụndụ emmepe na Moscow region na n'Oké Osimiri Azov, njem nlegharị anya na ikere òkè na nkà mmụta sayensị na omenala ndụ nke University.
Institute of Construction na Architecture
Institute of Hydraulic Engineering na Ike Osisi Construction
Institute of Engineering na ebe obibi Construction na ígwè ọrụ
Institute of Economics, Management na Ozi Systems na Construction na Real Estate
Institute of International Education na Language Communication
Moscow State University of Civil Engineering (Ọ dịghị MGSU) e guzobere 1921. tupu 1993 ọ maara dị ka Moscow Institute of Civil Engineering aha mgbe V.V. Kuibyshev (ozi). Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ochie technical institutes nke elu-akụziri nke Russian Federation. MISI e guzobere na-adabere na nke Middle obodo engineering mahadum, arụ ọrụ kemgbe 1907.The mbụ ngalaba na-guzobere na-«Industrial na obodo engineering», «Water ọkọnọ na mmiri mkpofu», «Hydrotechnical na pụrụ iche engineering», «Okpomọkụ na gas ọkọnọ na ventilashion» na «ígwè ọrụ na akpaaka nke obodo engineering». site 1933 karịrị 5000 ụmụ akwụkwọ na-amụ na Institute na ngalaba nwere 600 ndị mmadụ. The mbụ Akwụkwọ niile obodo engineering ọzụzụ e dere n'ebe ahụ na-nnukwu research laboratories na Postgraduate ọmụmụ haziri n'oge ahụ. na 1935 Moscow Institute of Civil Engineering aha mgbe V.V. Kuibyshev, na na ọ na-enwe a aha ruo mgbe 1993, mgbe e reorganized n'ime Moscow State University of Civil Engineering. Na post-agha afọ ahụ Institute e ifịk ifịk na-emepe emepe niile ntụziaka, ọhụrụ ngalaba na ikike iche e, ihe ụmụ akwụkwọ ebiere ndikpep na ya, ngalaba nọ na-amụba na-ole. MISI ndị ọkà mmụta sayensị na mmejuputa isi agụmakwụkwọ research, na Institute mere na kọntaktị na kpụrụ na nkà mmụta sayensị mmekorita ya na Russian na mba ọzọ na institutes nke elu-akụziri. Na 60s na 70s nke ikpeazụ nke narị afọ ọhụrụ ngalaba e guzosie ike: «Okpomọkụ na ume engineering», «Akpaghị aka na usoro nke na-ewu akara» na ndị ọzọ; ihe na teknuzu ndabere a na-kpụrụ, ọhụrụ laboratories na izi corpuses e wuru na ebe nke Moscow region, ọnụ na ọhụrụ na-amụrụ dormitories. Otu n'ime ihe ndị kasị akpali ihe ndị dị na akụkọ ihe mere eme nke MGSU bụ ihe e kere eke nke na-amụrụ ụlọ ìgwè. malite site 1956, MISI ụmụ akwụkwọ kwa afọ nọrọ okpomọkụ ọkara afọ agụmakwụkwọ na ewu na saịtị niile gburugburu mba. Na 80s na 90s nke XX narị afọ na Institute e ọma na-emepe emepe. Ọ mma mmụta ya na nnyocha na-eme. na 1988 na Education na Methodics Association nke obodo engineering Apata agha guzosie ike na ndabere nke MISI. ọ ugbua 28 technical institutes nke elu-akụziri na ụfọdụ 1000 ulo oru, Polytechnic, nkà na ụzụ Russian institutes nke elu-akụziri, na obodo engineering ngalaba. The International Association of Oru nke Higher Education na Civil Engineering e guzobere 1991. Taa, ọ na-aga site Rector nke MGSU, Volkov Andrey Anatolyevich. na 1993 na Institute gbanwere ya ọnọdụ - ya e renamed na Moscow State University of Civil Engineering (MGSU). na 2010 na University e nyere ọnọdụ nke «National Research University», dokwara irè mmejuputa izi na agụmakwụkwọ ọrụ na ndabere nke ụkpụrụ nke mwekota nke sayensị na-akụziri. Ọnọdụ nke «National Research University» guzosie ike site na Government nke Russian Federation maka ọzọ 10 afọ na-arụpụta nke asọmpi nhọrọ nke development mmemme nke mahadum, iji na staffing nke mkpa ntụziaka nke mmepe nke sayensị, technology, na ngwá, alaka nke aku na uba, na-elekọta mmadụ okirikiri, mmepe na iwebata na imewe nke elu teknụzụ, maka mahadum dokwara irè mejuputa atumatu nkuzi ihe nke elu ọkachamara na Postgraduate ọkachamara mmụta na-arụ isi-zuru ezu na etinyere nnyocha sayensị na a dịgasị iche iche nke sayensị. N'oge ugbu oge MGSU bụ a na-eduga obodo engineering guzobe ememe nke elu-akụziri na Russian Federation. The University comprises 10 nnukwu institutes, karịrị 50 ngalaba, mmejuputa ọzụzụ nke ọkachamara na a dịgasị iche iche nke nkà mmụta sayensị na ebe. Enwere 40 pụrụ iche na nkà mmụta sayensị laboratories; karịrị 50 otutu owuwu na-eme ka ndị ọkà mmụta sayensị na ịmalite nchọpụta na okirikiri nke imewe na-ewu nke ala nakwa ụlọ, owuwu na okụre, ịbụ onye otutu ọdọ mmiri nke ọhụrụ ihe ọmụma na obodo engineering. E nwere ugbu a karịa 18000 ụmụ akwụkwọ na-amụ na Mahadum. MGSU nwere 6 alaka na Moscow mpaghara na otu alaka na Samara region, 8 itieutom na Moscow region, 3 itieutom na Tumen, Smolensk na Tula mpaghara, nakwa dị ka ụlọ ọrụ dị na Republic of Bashkortostan na Stavropolsk region. The elu nke MGSU gụsịrị akwụkwọ na-egosi na Asambodo nke akwụkwọ ozi nke izi ọrụ nke University ka chọrọ nke International Standard ISO 9001:2008. The akwụkwọ e ọdịda site Switzerland ụlọ ọrụ SGS, ịbụ akụkụ nke J.Randall nke International Accreditation Forum na-ghọtara na 140 mba nke ụwa.
Ị chọrọ atụle Moscow State University of Civil Engineering ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Moscow State University of Civil Engineering na Map
photos: Moscow State University of Civil Engineering ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Moscow State University of Civil Engineering.